Dhalaankii Sonyo oo Taladii Kala Wareegay Madaxweynihii la Doortay Iyo Ficilada Isbahaysiga oo ka Daran Kooxdii Damul-jadiid iyo Haweenkii u kala Dambeeyey Talada Magacyada Kooxda iyo Iskoolkoodii Itoobiya....
Wednesday April 04, 2018 - 17:15:53 in Wararka by Super Admin
Waxaan halkan bulshada ugu soo gudbinayaa aragti daaha ka faydaysa koox cusub oo la wareegtay taladii Somaliland.
Dad badan oo siyaasada odorosa ayaa waxay muddo ku aad ula yaabanaayeen cugashada madaxweynaha golaha wasiirada iyo hayadaha madax banaan iyo agaasimayaasha guud mar walba waxaa muuqanaysay maxsuul ah dadka la magacaabayo inaanay ahayn kuwo ku soo baxay aragti madaxweynaha ka curanaysa wàayo maaha kuwo ay badankoodu ay isgaadhayaan amaba uu isagu qiimayn karaayo haday tahay dhinaca da ada oo dhamaantood yihiin juniour aan inta badani xafiisyo dawladeed oo horeba soo qaban.
Waxaa la daraasadan siyaasadeed soo saartay inay dhamaantood koox isku iskuul ah oo isku xidhan ka soo wada baxay ethopia , waxaa kalio soo baxday inay koox yaryar qabsadeen dhegtii madaxweynaha ayna yihiin kuwa ay taladani kasoo fusho kooxdan kuwa ugu xoga badani waa kuwo madaxweynuhu abti u yahay iyo xoghaynta madaxweynaha ee mubaarik waana halka ay kasoo baxayso taladan aadka loola yaaban yahay.
Waxaa hore inoo soo maray koox xukunka isku duubtay oo hindiya ka soo baxay , waxaa kale oo ina soo maray koox haween ah oo xukunka maroorsaday wadanka maamushay , iminkana waxaa xukunkii gacanta u galay koox dhalin yaro ah oo juniour ah oo saydartay xukunkii wadanka haddaba aragtidani waxay leedahay maadaama ay waayo arag u nahay koox laba diblaysata xukunka wadanka keebaa roonaan doona kooxdii hindiya ee iyagu hore aan usoo aragnay , kooxdii haweenka ahaa ee ku xigay laakiin iyagu waaya araga ahaa iyo kooxdan caruurta ah ee iminka xukunku u gacan galay ,
Wasiirka maaliyada , ka maalgashiga & agaasimihiisa guud , agaasimahii hore ee hawlaha guud , ka qorshaynta , wasiir kuxigeenka caafimaadka, agaasimaha guud ee maaliyada, Wasiirka qorsheynta iyo ku xigeenka qorsheynta.
Wasiir kuxigeenka maaliyada , wasiirka boosaha , ka cadaalada dhamaantood waa kuwo kuwada xidhnaa dalada sonyo iyo schoolo ethopia ah, Arrintani iminka dhacda masuulka la magacaabo inloo eego halka uu sonyo kaga xidhan yahay iyo kooxdan. Aragtidani waxay leedahay keeba la qaatay Damul-jadiid, Guurtida bilaa shaarubaha ah iyo Dhalaanka Soonyo.
Waxana hoggaamiye u ah iskuna xidha Xoghayaha gaarka ah ee Madaxweyne Muuse Ninka lagu magacaabo Mubaarak Taani. La soco xogo kale oo Daaha ka Fayday ficillada ciyaalka ee taladii kala wareegay Madaxweynuhuu la doortay.
Farxaan Cali Warsame